Consuelo López-Zuriaga. Kubvunzana neNadal Prize finalist | Zvazvino Zvinyorwa
Consuelo López-Zuriaga. Kubvunzana neNadal Prize finalist
Mufananidzo: Consuelo López-Zuriaga. Facebook nhoroondo.
Consuelo Lopez-Zuriaga fue fainari yeyekupedzisira Nadal Mubairo neruzivo Pamwe mukudonha, yaakaburitsa pakupera kwaApril. Muizvi indavhiyu Anotiudza nezvake uye nekuuya kwake munguva pfupi yapfuura munyika yekutsikisa. Ndinotenda chaizvo mutsa wako nenguva.
Consuelo López-Zuriaga. Kubvunzurudza
BHUKU NEWS: Pamwe mukudonha Ndiyo kanoverengeka zvako kekutanga uye anga ari mufainari wekupedzisira Nadal Prize. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
CONSUELO LOPEZ-ZURIAGA: Zvichida mumatsutso taura nezve kushomeka kweyakajairika hupenyu hwedu. Hupenyu hwezuva nezuva hungashanduka sei, munguva pfupi, kana uchinge wasangana nekufa. Iyo nyaya inoedza kutora iyo nguva kana zvakajairika zvamira kuvapo.
Kana iri nyaya, inotaura nezve hupenyu hwe Claudia figueroa, gweta rine hunyanzvi rakazvipira kudzivirira kodzero dzevanhu, rinotora mukana wakakura apo Mauricio, mumwe wako, unoonekwa uine gomarara repamberi. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, protagonist anofanirwa kuita sarudzo dzakakosha dzinochinja izvo, kusvika panguva iyoyo, hwaive hupenyu hwake uye zvishuwo zvake. Pasina mepu kana kambasi yekutarisana nekuparara kwechirwere nekusanzwisisa kwerufu, anotanga nzira yaanopokana pakati pekutya kurasikirwa nemurume waanoda, kuzorora nehupenyu hwake hwekare uye kuziva kuti haazombove akafanana zvakare.
Muchidimbu, Pamwe mukudonha inorondedzera a Shanduko proccess kwaanoenda kwekupedzisira ndiko kukunda kutya kwekurega kuve izvo zvatagara tiri.
Pfungwa yenoverengeka ine nhoroondo uye zvimwe zvinyorwa zvakatangira. Nezve chekutanga, zvinouya kubva pane zvangu ruzivo nekenza uye kukanganisa kwakabatwa neumwe wangu pahupenyu hwedu. Nezve wechipiri, rangano yenyaya iyi nezwi rayo rinorondedzera rakabva mumashoko a Joan Didionriini en Gore reMagical Kufunga, akati: «Unogara pasi pakudya uye hupenyu hwawaimboziva hwapera ». Kuverenga Didion kwakandipa toni yeruzivo. Iye munyori ane kugona kunotyisa rondedzera chokwadi zvikuru zvinoshamisa yehupenyu hwavo neinenge yekuvhiya chaiyo, kure nekubatwa uye chero manzwiro. Ini ndaida kuisa izwi raClaudia rinorondedzera mune iro rejista, uko manzwiro asingadzvinyiriri kana kuwandisa, asi inosvika kumuverengi zvine simba.
AL: Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
CLZ: Mabhuku ekutanga andinorangarira kuverenga ndeaya Enid Blyton. Varume Vatatu Vakachenjera vakagara vachiuya vakatakura kopi ye Vashanu, Zvakavanzika Zvinomwe kana kubva kuchikoro icho chebhodhingi - pre Harry Potter asiwo zvakare weBritish - yaive Malory Towers. ari tinkles, nemucheka musana, kubva muunganidzwa wehama yangu uye adventures e Asterix naObelix Vakandiperekedzawo muzvikafu zvishoma zvechingwa nechokoreti.
Ini ndaive musikana wekutanga uye muverengi uye, pamwe nekuda kweichi chikonzero, iko kunyora kwakakurumidza kumera muchimiro che pdiki rondedzero uye nyaya. Nyaya dzaanga achichengeta mumabhuku, achiperekedzwa nemifananidzo uye macollage, senge zvisaririra zvehupenyu hwakatanga kusimuka.
KU: Munyori mukuru? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
CLZ: Hazvigoneke kudzikamisa kune imwechete chete, kune vanyori vakawanda vakandikurudzira uye vandakazoona navo kuti "kufambira mberi kukuru kuchokwadi" kuri kuverenga. Ini ndinoda vanyori venhau vezana ramakore rechiXNUMX uye kugona kwavo kwakakura kurondedzera se Flaubert, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevsky, dickens, Galdós kana Clarín. Asi ini ndinofarirawo nezve kutarisika kunokanganisa kwakaitwa nemaAmerican pachokwadi, Hemingway, Dospassos, Scott Fitzgerald, Cheever kana Richard Yates.
Kana neniwo handikwanise kukanganwa avo vanyori vanoona neruzivo uye, panguva imwechete, kubvunza yangu yega nhoroondo chirongwa se Faulkner, Cortázar, Kafka kana Juan Rulfo. Uye munguva dzichangopfuura, ndakapihwa mukutya kwehuchenjeri hwenhoroondo ye Lucia Berlin uye kugona kwake kushandura mabituru e squalor kuita nyaya dzakajeka.
CLZ: Gregory samsa, protagonist we MetamorphosisAnotaridzika kwandiri sehunhu hunoshamisa uyo anoratidzira akaturikidzana uye anoratidza seasina mumwe kusurukirwa uye kurwadziwa kwepasirese, pamwe nekuzvidza mumwe, akasiyana, mutorwa.
Uyewo Emma bovary Icho chisikwa chakakurisa icho chinonongedzera kukukuvadzwa kwerudo rwekudanana uye chepfu yemupfungwa, ichiva chinhu chisina mubvunzo.
CLZ: Ndine tsika shomanana. Ini ndoda kusazvigadzika pachangu. Ini ndinongoda sIlencio, kofi uye tafura yakajeka. Kuti ndinyore ndinofanira kuzviteerera, zvakakosha kuti uterere kune vatambi uye nekuona zviitiko zvacho kuitira kuti nyaya iwedzere palaptop screen.
CLZ: Ndinonyora ndakanyarara. Ndinofanira kuzviparadzanisa kunyora kudaro, sezvo ndichigara munyika, ndawana nzvimbo yakakwana. Kuchinja migwagwa yeMadrid sango kwakawedzera kugona kwangu kutarisisa. Zvakare, pandinobatika, ndinosheedza mabhureki ndoenda kunokwira musango. Nekudaro, ini handifunge kuti unofanirwa kumirira "kamuri yako wega", yekoloni tafura kana chidzidzo chine maonero egungwa. Kana iyo nyaya ikagara mukati mako, enda kumberi nekuchimbidzika, usingamire uye zvisinei nekuti uripi. Ndinonyora zvakanyanya mangwanani apo ruzha rwezuva rwacho rwusati rwapinda mumusoro mangu uye nhoroondo inotasva pasina kukanganisa.
Me encanta verenga wakarara pasofa kana kuzviita pamubhedha, kunyangwe ini ndikaverengawo mubhazi, muMetro, pazvitima nendege, mumakamuri ekumirira uye chero kupi, apo nyaya yacho inondibata uye ndinodya peji rega rega rebhuku kusvikira ndasvika kumagumo. Pakati pezvinhu chiuru zvandinotakura mubhegi rangu pane bhuku kazhinji.
KU: Pane mamwe marudzi aunoda here?
CLZ: Ndakaverengawo Ensayo, nhoroondo yeunyanzvi uye ndinoda iyo nhoroondo yenhau. Kunze kwebindu chairo rekunyora, ndinoda bhotani uye mabhuku ekubika.
CLZ: Nguva pfupi yapfuura ndakaverenga iyo yakanaka trilogy ye Rachel Kusk, Backlight, Kufamba y Prestige. Ini ndawana zvisingaite sei iyo Kushaikwa kwechirongwa, kwechikonzero-chinokonzeresa kufunga, kure nekutitungamira mukusava nebasa, kunotitungamira kune mosaic yezvimedu zvinogara zvese uye zvinoumba iyo bhuku pachayo. Neniwo kuverenga zvekare a Miguel Delibes chinobata mufananidzo, munyori mukuru asingambofi akaodza mwoyo.
Kana zviri zvekunyora, ini ndiri muchikamu che kuronga yangu inoverengeka inotevera. Nyaya ine simba rezvakavanzika: izvo zvinoburitsa ruregerero uye, izvo, kuti zviri nani kusaburitsa.
KU: Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa chiri sei uye chii chakasarudza iwe kuyedza kutsikisa?
CLZ: Ini ndichangomhara munyika yekutsikisa, saka handingashinga kuita ongororo yakazara pamamiriro azvino. Maonero angu ekutanga akavhiringidzika. Ndiri kuona musika wakazara, une huwandu hukuru hwemanyoro, hazvigoneke kufambisa kuburikidza nevashambadzi vanowanzoitika; uye kune rimwe divi, iniwo ndinoona a inoshandura system, uko dzimwe nzira dzinonakidza dzekuburitsa uye mafomati anomuka, uye panokwikwidzana nedzimwe nzira dze «varaidzo» inotyisa. Muchidimbu, kune kusagadzikana pakati pekudonha uye hunyanzvi.
Sarudzo yangu yekuzvivhura ini kutsikisa inosangana ne chivimbo iye iye bhuku rinopera kana muverengi asvika peji rekupedzisira. Ini ndinofunga mashiripiti ezvinyorwa ari mukufamba rwendo irworwo pakati pemunyori nemuverengi. Iyo novel, Umberto Eco yatoti, «iwo muchina wekududzira ».
KU: Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo iri kukuomera here kana iwe uchave unokwanisa kuchengeta chimwe chinhu chakanakira ngano dzeramangwana?
CLZ: Gore rapfuura rave rakaoma uye rakasuruvarisa vanhu vazhinji, asi pamwe chikamu chakanaka chave chiri chekuti denda rataridza kusakosha kwakakosha kwehupenyu hwedu uye kupusa kwekuvapo kwekuzvikudza. Isu tinogona kunge tichinyanya kuziva. Chimwe chinhu chakakosha ndeye kuverenga kuwedzera. Vanhu vazhinji vatora mabhuku vachitarisa mumapeji avo ekutiza, kunyaradzwa, kudzidza ... Muchidimbu, mashiripiti ezvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Consuelo López-Zuriaga. Kubvunzana neNadal Prize finalist